HomeWararka CiyaarahaRoma oo u muuqata mid lumineysa lasoo wareegitaanka Granit Xhaka
July 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Roma ayaa lagu soo waramayaa inay seegi karto heshiiska Granit Xhaka , madaama kooxda reer Talyaani aysan diyaar u aheyn inay bixiso qiimaha Arsenal ku dooneyso ciyaaryahanka reer Switzerland.
28 jirkaan ayaa loo maleynayay inuu qarka u saaran yahay inuu dhameystiro ku biiritaanka kooxda Jose Mourinho , iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu aqbalo mushahar dhimista si uu heshiiska u riixo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Il Tempo , ‘wax walba way istaageen’ oo ku saabsan wadahadalada, maaddaama Roma aysan weli la kulmin qiimeynta Arsenal ee qadka dhexe ee qibradda leh.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Gunners ay diidan tahay inay ku iibiso Xhaka lacag ka yar € 20m (£ 17m), iyadoo kooxo kale oo badan ay il gaar ah ku hayaan waxyaabaha soo kordha.
Xhaka ayaa markale boos joogta ah ka helay Arsenal intii lagu gudajiray ololihii 2020-21, isagoo saftay 45 kulan tartamada oo dhan, laakiin looma maleynayo inuu kujiro qorshaha tababaraha Mikel Arteta .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa dhaliyay 13 jeer isla markaana diiwaan geliyay 20 caawiye 220 kulan oo uu u saftay kooxda ka dhisan Waqooyiga London tan iyo markii uu ka yimid Borussia Monchengladbach sanadkii 2016.